8-da Bedel ee ugu Fiican ee PowerPoint | Wararka Gadget
Ignacio Sala | | Software, Tababarada
20-kii sano ee la soo dhaafay, waxaan aragnay laba qaab oo noqday halbeegga internetka dhexdiisa. Dhinaca kale waxaan ku helaynaa feylasha qaab PDF ah, qaab hadda asal ahaan la jaan qaadaya dhammaan nidaamyada hawlgalka iyada oo aan la adeegsan wax codsi dibadeed ah si loo furo. Dhinaca kale, waxaan ku helnaa bandhigyada qaababka .pps iyo .pptx. Kordhintani waxay u dhigantaa faylasha Abuur bandhigyo ka socda barnaamijka Microsoft PowerPoint.
Si loo helo bandhigyada lagu abuuray codsigan, waxaa lagama maarmaan ah in la helo daawade iswaafajiya, dhammaantoodna waa kuwo iswaafajinaya laakiin aan laga heli karin waddan ahaan. Microsoft PowerPoint waa barnaamijka ugu fiican ee hadda laga heli karo suuqa si loogu soo bandhigo nooc kasta ha ahaadee, laakiin waa codsi u baahan rukhsad Office 365 ah si ay u awoodaan inay adeegsadaan. Haddii aad raadineyso codsiyo kale si aad u abuurto bandhigyo, markaa waxaan ku tusaynaa waxa ay yihiin beddelka ugu fiican ee PowerPoint.
Waxyaabaha beddelka ah ee hadda laga heli karo suuqa, waxaan ka heli karnaa ikhtiyaarro bilaash ah iyo kuwo lacag leh, sidaa darteed ma noqon karto fikrad xun in la bixiyo xubin ka mid ah Office 365 hadaan ugu talo galnay inaan waxbadan ka faa iidaysanno PowerPoint, iyada oo loo marayo shaqadeena caadiga ah ama waqtigeena firaaqada ah si aan awood ugu yeelano inaan natiijada ugu beddelno fiidiyow si aan ugu daabacno goor dambe barta fiidiyowga loogu isticmaalo adduunka: YouTube. Fursadaha iyo fursadaha ay PowerPoint na siiso waa kuwo aan dhammaad lahayn, sababtuna waxay ahayd inay suuqa ku jirtay sannado badan inay noqoto madal ugu wanaagsan ee lagu abuuri karo bandhigyo, sida Microsoft Word ama Excel oo ku kala jira goobahooda.
1 Muhiim ah, PowerPoint-ka Apple
2 Google Slides, beddelka Google
3 Prezi, mid ka mid ah beddelka khadka tooska ah ee ugu wanaagsan
4 Ludus, u samee bandhigyo firfircoon qaab fudud
5 Canva, waxa si adag loo baahan yahay
6 Swipe, u jeedi khudbadaha wadahadal
7 Slidebean, waxyaabo la taaban karo
8 Zoho, oo uu waxyooday PowerPoint
9 Beddelka ugu fiican ee PowerPoint?
Muhiim ah, PowerPoint-ka Apple
Waxaan ku bilaabaynaa kala soociddan bedel bilaash ah oo loogu talagalay Apple waxay u sahlaysaa dhamaan isticmaaleyaasha labadaba mashiinka desktop-ka, macOS, iyo aaladda qalabka mobilada, macruufka. Muddo sanado ah hadda, Apple waxay u fidisay arjiga Muhiimka ah dhammaan isticmaaleyaasha haysta ID-ka Apple lacag la’aan, marka lagu daro inta kale ee codsiyada ah ee qayb ka ah iWork, xitaa haddii aysan haysan wax terminal ah oo ay soo saartay Apple, tan iyo iyada oo loo marayo iCloud.com way qaban kartaa dhammaan adeegyada ay na siiso, oo ay ku jiraan Muhiimka, Bogagga iyo Nambarada.
Iyadoo ay run tahay taas tiro badan oo ikhtiyaarro ah ayaa maqan Si aad u awoodo inaad u habeyso xitaa faahfaahinta ugu yar, hadda waa mid ka mid ah beddelka ugu fiican ee bilaashka ah iyo lacag bixinta ee laga heli karo suuqa. Intaa waxaa dheer, Apple waxay si joogto ah u cusbooneysiisaa arjiga iyagoo ku daraya shaqooyin iyo qalab cusub oo noo oggolaanaya inaan sii hagaajinno soo bandhigeenna sidoo kale ku darno is waafajin ballaaran oo faylasha iyo qaabab ah.
Google Slides, beddelka Google
Beddelka kale ee weyn ee gebi ahaanba bilaashka ah waxaa laga helaa qaybta xafiiska ee internetka ee Google ay na siiso oo loo yaqaan 'Slides'. Slides waa a dalab daruur ku saleysan Taas oo aan ku abuuri karno bandhigyadeena, qaar ka mid ah bandhigyada aasaasiga ah oo aan lahayn wax badan, maxaa yeelay waxay la il daran tahay fursado badan. Haddii ay tahay inaan si wada jir ah u soo bandhigno, adeegani waa mid ka mid ah kuwa ugu wanaagsan ee aan ka heli karno suuqa, maaddaama ay sidoo kale na siiso sheeko si qof kasta oo ka tirsan mashruuca uu ula shaqeeyo oo u hadlo waqtiga dhabta ah.
Ahaansho ku dhex jira nidaamka deegaanka ee Google, waxaan marin toos ah ugu leenahay sawirada aan ku keydinay Google Photos si aan awood ugu yeelano inaan si toos ah ugu soo bandhigo soo bandhigida adoon u baahnayn inaad soo dhigtid waqti kasta daruurta Google si loogu daro Dhammaan bandhigyada waxaa lagu keydiyaa koontadeena Google Drive, oo na siisa, oo ay weheliyaan Gmail iyo Sawirrada Google, illaa 15 GB oo keyd ah oo gebi ahaanba bilaash ah. Google Slides wuxuu ku dhexjiraa Google Drive wuxuuna ku abuurayaa bandhig Google Slides, kaliya waa inaan gujino New si aan uxulno nooca file aan dooneyno inaan abuurno.
Prezi, mid ka mid ah beddelka khadka tooska ah ee ugu wanaagsan
Maaddaama bandhigyada PowerPoint ay bilaabeen inay qabtaan, Prezi bilaabay inuu noqdo, mudnaantiisa gaarka ah, mid ka mid ah beddellada ugu fiican ee laga heli karo suuqa, iyo weli maanta. Thanks to Prezi waxaan ku abuuri karnaa bandhigyo firfircoon iyadoo loo marayo mowduucyada kaladuwan ee madashu na siiso, mowduucyada aan ku dari karno tirada walxaha dheeriga ah ee aan dooneyno
Waad ku mahadsan tahay isbeddelada firfircoon, halkii aad u ekaan laheyd inaan aragno isbadal, waxay na siin doontaa dareenka inaan daawaneyno fiidiyow yar oo xitaa maadada ugu caajiska badan ay noqon karto mid xiiso leh. Haddii aad qorsheyneyso inaad si isdaba joog ah u adeegsato adeeggan, Prezi gabi ahaanba waa bilaash haddii aadan wax dhibaato ah ku qabin bandhigyada in qof walba heli karo. Haddii, dhinaca kale, aadan rabin inaad la wadaagto abuurkaaga, waa inaad tagtaa goobta wax lagu baaro oo aad ka heshaa mid ka mid ah qorshooyinka billaha ee kala duwan ee barnaamijkani na siinayo.
Ludus, u samee bandhigyo firfircoon qaab fudud
Luud, sida Prezi, waa mid kale oo ka mid ah adeegyada shabakadaha ee sanadihii la soo dhaafay la wareegay qayb weyn oo ka mid ah dadka isticmaala kuwaas oo u baahan inay abuuraan nooc kasta oo bandhig ah. Hadaan rabno Abuur bandhigyo umuuqda fiidiyow intabadan bandhig Ludus waa ikhtiyaarka ugu fiican. Fiidiyowga kore waxaad ku arki kartaa dhammaan xulashooyinka ay na siiso iyo wax kasta oo aan ku qaban karno adeeggan cajiibka ah.
Mid ka mid ah faa'iidooyinka ugu waaweyn ee ay na siiso marka la barbar dhigo adeegyada kale sida Prezi, waa dhexgalka YouTube, Giphy, SoundCloud, Google Maps, Facebook, Instagram ... taas oo noo oggolaaneysa inaan si dhakhso leh oo fudud ugu darno wax kasta oo ka mid ah barnaamijyadan. Waad ku mahadsantahay isdhexgalka iyo iswaafajinta feylasha qaabka GIF, waxaan abuuri karnaa filimo yar yar intii aan soo bandhigi lahayn.
Nooca bilaashka ah ee Ludus ayaa noo ogolaanaya abuuro illaa 20 bandhigyo, kaydinta illaa 2GB iyo suurtagalnimada in la awoodo in loo dhoofiyo bogagga qaabka PDF. Laakiin haddii aan dooneyno wax intaa ka sii badan, waa inaan tagnaa sanduuqa oo aan doorannaa qorshaha Pro, oo ah qorshe noo oggolaanaya inaan abuurno tiro aan xadidneyn oo soo bandhigitaanno ah, bandhigyo aan ku keydin karno 10 GB oo bannaan oo ay na siiso , suurtagalnimada in la soo dejiyo bandhigga si aan u soo bandhigno iyada oo aan ku xirneyn internetka marka lagu daro noo oggolaanshaha inaan ku ilaalino bandhigyada lambar sir ah.
Canva, waxa si adag loo baahan yahay
Haddii waxa aan raadineyno ay yihiin a Fudud, beddel la'aan ah PowerPoint, iyo Prezi iyo Ludus labaduba waa nagu weyn yihiin, Canva waxay noqon kartaa beddelka aad raadineyso. Canva waxay na siisaa tiro badan oo sawiro ah, si loogu daro bandhigyada gebi ahaanba bilaash, iyadoo laga fogaanayo inay tahay inaan si joogto ah u raadino Google sawirada si aan u abuurno bandhigyadayada. Hawlgalku waa mid aad u fudud, maaddaama ay tahay inaan kaliya xulano cunsurrada aan dooneyno inaan ku darno oo aan u jiideyno goobta aan dooneyno inay ku leeyihiin soo bandhigidda.
Waxay kaloo noo ogolaataa koox koox ugu shaqeeyaan, wuxuu na siiyaa marin u hello in ka badan 8.000 oo arrimo ah iyo 1 GB oo keyd ah oo nooca bilaashka ah ah. Haddii aan dooranno nooca Pro, oo qiimahiisu yahay $ 12,95 bishiiba, waxaan sidoo kale heli doonnaa in ka badan 400.000 oo sawirro iyo sheybaallo ah, waxaan isticmaali karnaa noocyada qaabeynta, abaabulidda sawirrada iyo soo bandhigidda faylalka, naqshadaha dhoofinta sida GIFs marka lagu daro inaad dib u isticmaali karto bandhigyo kale ...
Swipe, u jeedi khudbadaha wadahadal
Mararka qaarkood waxaa nalagu qasbay inaan abuurno bandhigyo taas ah maahan inay muujiyaan macluumaad muuqaal ahTaabadalkeed, waxay ku saabsan tahay bixinta macluumaadka adoo siinaya xulashooyin kala duwan, waxayna kuxirantahay midka aan doorano, hal macluumaad ama mid kale ayaa soo muuqan doona. Kiiskan, Jiid Waa mid ka mid ah xulashooyinka ugu fiican suuqa. Intaa waxaa sii dheer, maadaama loogu talagalay ujeedkan, waxaan ku dari karnaa qoraalo dherer kala duwan leh mahadnaqa Markdown.
Nooca bilaashka ah ayaa noo ogolaanaya iskaashi tiro aan xadid lahayn oo soo bandhigid ah, abuuro bandhigyo gaar ah oo u dhoofiyaan natiijada qaab PDF ah. Haddii aan dooneyno inaan ku darno tirakoob, ilaalin sirta ah, raadinta iskuxirka, taageerada iyo waxyaabo kale oo badan, waa inaan ka iibsanaa 15 euro bishiiba.
Slidebean, waxyaabo la taaban karo
Haddii si caadi ah nalagu qasbay abuur nooc ka mid ah soo bandhigida, ama in la soo bandhigo wax soo saar, ka warbixi natiijooyinka saddexdii biloodba mar, ee ku saabsan mashruuc, ama xaalad kasta oo kale oo u baahan taxane taxane ah oo horay loo dejiyey, Slidebean Waa ikhtiyaarka ugu fiican suuqa. Iyada oo loo marayo Slidebean kaliya waa inaan ku xulanaa nooca shaybaarka aan raadineyno oo aan ku badalno xogteeda midkeena. Sida ugu fudud ee.
Slidesbean looguma talagalin in wax laga beddelo interface-ka, ama in lagu daro ama laga saaro waxyaabaha, laakiin loo u fududee abuurista inta suurtagal ah adeegsadaha, si aad kaliya diiradda u saarto waxa muhiimka ah isla markaana wax ka yar 5 daqiiqo aad ku diyaarin karto soo-jeedinta. Si ka duwan adeegyada kale, Slidebean nama siiso qorshe bilaash ah oo aan ku tijaabinno sida arjiga u shaqeeyo, laakiin iyadoo aan loo eegin qorshaha aan dooranay, waxaan leenahay muddo tijaabo ah oo aan ku eegeyno inay ku habboon tahay baahideena.
Zoho, oo uu waxyooday PowerPoint
Hadaad leedahay loo isticmaali jiray PowerPoint oo ma jecli inaad bilaabeysid inaad baratid sida adeegyada kale ee internetka ama codsiyada lagu abuurayo bandhigyada ay u shaqeeyaan, Show Zoho Waa waxa ugu dhow PowerPoint ee aan heli doonno, maaddaama ay isku xirnaanta iyo sidoo kale tirada xulashooyinka, ugu yaraan kuwa ugu aasaasiga ah, ay aad ugu eg yihiin kuwa aan ka heli karno barnaamijka Microsoft. Ku darista sawirada, sanduuqyada qoraalka, fallaaraha, khadadka… wax walbo waa wax aad u fudud in lagu abuuro Zoho Show.
Marka laga hadlayo tirada sheybaarka ee aan hayno, waa mid xadidan, maahan in ficil ahaan aan jirin loo sheego, laakiin haddii male-awaalkaagu uu yahay waxaaga oo aanad dhib ku qabin wax ka qabashada bogagga bannaan, waxaa laga yaabaa inaad ugu dambayntii heshay dalabka aad u baahan tahay si aad u abuurto bandhigyadaada caadiga ah.
Beddelka ugu fiican ee PowerPoint?
Sideen u arki karnaa mid kasta oo ka mid ah adeegyada / barnaamijyada websaydhka ee aan kugu soo bandhignay maqaalkan waxay ku jihaysan yihiin himilooyin kala duwan, sidaa darteed haddii waxkeennu yahay in la abuuro bandhigyo cajaa’ib leh, ikhtiyaarka ugu fiican waa Ludus, halka haddii aan dooneyno inaan abuurno bandhigyo iyadoo la adeegsanayo arrimo, Slidebean ayaa habboon. Wax walba waxay kuxiranyihiin baahiyaheena, marka waa inaad si cad ugahadashaa kahor intaadan shaqaaleysiinin adeeg oo aad bilawdo inaad barato naftaada.
Wadada buuxda ee maqaalka: War gadget » General » Tababarada » Beddelka ugu fiican ee PowerPoint